येशूको उत्कृष्ट जीवन देखा परिसकेको छ; तैँले डराउनुपर्ने कुरा केही छैन। शैतानहरू हाम्रो पाउमुनि छन्, र तिनीहरूको समय धेरै टिक्नेछैन। बिउँझी! दुराचारको संसारलाई त्याग्; आफूलाई मृत्युको सुरुङबाट मुक्त गर्! जेसुकै भए तापनि मप्रति निष्ठावान बन्, र साहसी भएर अघि बढ्; म तेरो शक्तिको चट्टान हुँ, त्यसैले मप्रति भरोसा राख्!